Ny korontana semantika amin'ny olon-dehibe: teôria sy fanazaran-tena maimaim-poana - Fampiofanana kognitive
Ny korontana semantika amin'ny olon-dehibe: teôria ary fampiharana maimaim-poana
Ianao izao: Home » Articles » fiteny » Ny korontana semantika amin'ny olon-dehibe: teôria ary fampiharana maimaim-poana
Matetika isika dia matetika no mihevitra ny lexicon sy semantika ho toy ny orinasa roa mitovy, na tsy mitovy. Raha ny tena izy, na dia ny lexicon aza dia azontsika an-tsaina azy ho toy ny andiana "labels verbal" izay ampiarahintsika amin'ny hetsika, zavatra na zavatra hafa. ny semantika dia mitana andraikitra lalindalina kokoa, ary manana ny toeran'ny interface eo amin'ny fiteny sy ny fomba fandaminana fahalalana.
Araka ny teôria sasany, azontsika atao ny mametraka ny fahasamihafana misy eo amin'ny orinasa roa (ohatra, biby roa) miankina amin'ny fananana sasany na na: ny liona mihinana hena, ny elefanta dia ahitra, ny akoho manana tongotra roa, ny vorona manidina. Azontsika atao ny manendry ireo santionany miaraka amina endri-javatra maro iraisan'ny iray sy mitovy sokajy (ny liona sy ny elefanta, na eo aza ny tsy fitoviana, dia azo antoka fa manana toetra mitovy kokoa amin'izy samy izy fa tsy amin'ny tantanana). Io teôria io dia novolavolaina nandritra ny taona maro, ary koa manoloana ny zava-misy fa, araka ny nanasongadinana, dia tsy mitovy ny fomba fiheverantsika ny mpikambana rehetra amin'ny sokajy (voromailala, ohatra, mifanitsy kokoa amin'ny sokajy "vorona" noho ny penguin ); izany dia nanjary fampandrosoana ny foto-kevitr'i prototyping, izany no zava-misy fa ao anatin'ny sokajy tsirairay dia misy santionany misolo tena be kokoa noho ny hafa.
Amin'ny aphasias dia tsy dia mahazatra loatra ny mahita mitokana ny fikorontanana semantika. Mifanohitra amin'izany aza, mety hitranga izany sasany dementias manomboka mazava tsara amin'ny fiharatsy ny rafitra semantika: amin'ity tranga ity, ny fiteny dia mety ho marina amin'ny fijerin'ny feo sy ny rafitry ny fitsipi-pitenenana, fa ny marary kosa dia mety ho voatarika hanao paraphasias semantika, mampisavoritaka, ohatra, "antsy" misy "fork" na mampiasa sokajy superordinate ho "biby" an'ny "alika". Amin'ny fomba fijery azo ampiharina, mety hitranga ireo marary ireo fa afaka mampiasa ireo zavatra efa nahazatra azy (toa ny telefaoniny), fa izany dia tsy afaka manitatra izany fihetsika izany amin'ny zavatra mitovy aminy, fa vaovao (toy ny telefaona vaovao). Rehefa dinihina tokoa, ny antony mandrindra ny fahalalana ao anaty sokajy ny atidoha dia ny mampihatra fitondran-tena mahazatra, ohatra fuggire eo alohan'ireo karnavora rehetra o mangiare manoloana ny fihinana rehetra.
Ny ankamaroan'ny hetsika fanodinana rafitra semantika dia misy fanazaran-tena ao endrika efa, tadiavo ny mpiditra an-tsokosoko e fampitahana tarehimarika teny. Ireto misy sasany amin'ireo hetsika maimaimpoana ataonay.
Mamy / tsy mamy: hanasokajiana - Diso marina - Jereo ny miditra an-tsehatra
Legioma voankazo: hanasokajiana - Diso marina - Jereo ny miditra an-tsehatra
Mihinana / tsy mihinana izahay: hanasokajiana - Diso marina - Jereo ny miditra an-tsehatra
Fahavaratra / Ririnina: hanasokajiana - Diso marina - Jereo ny miditra an-tsehatra
Fanontaniana diso-marina: Clothing - Pets - Dia midika hoe ny fitaterana - zavatra
Sort: Biby (kely-lehibe) - Voankazo sy legioma (kely-lehibe) - Fitaterana (miadana-haingana) - Zavatra (capacious kokoa-tsy capacious)
Mety hahaliana anao koa izany
Ao amin'ny Aphasia GameCenter dia hahita hetsika hafa momba ny fanarenana ny kabary amin'ny olon-dehibe ianao
Andininy: inona ny aphasia ary inona no azo atao
Lahatsoratra: Ny fitsaboana ny fahatakarana famakiana amin'ny aphasia
Andininy: fitsaboana amin'ny kabary aphasia aorian'ny fiterahana: mahasoa ve izany?
Lahatsoratra: fanarenana ny fanoratana amin'ny aphasia amin'ny alàlan'ny… WhatsApp!
Article: aphasia - ny fananganana ny sazy
Lahatsoratra: aphasia sy antokom-pinoana: teknika sy valiny ampitahaina
aphasia, tapaka lalan-dra, Lexicon, semantics, fitsaboana semantik
Ny korontana semantika amin'ny olon-dehibe: teôria ary fampiharana maimaim-poana2020-09-192020-09-21http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngFiofanana aretin-tsainahttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2020/09/trattamento-semantico.jpg200px200px